Arsii Asallaatti haati Siinqee fi maanguddoonni gocha Addisu Arega Kitessa mormuun hiriira bahan. Addisuun Dachee Oromiyaa keessa imaluuf hamilee hin qabu. Aangoo irraa kaafamee Seeratti …
Dubbiin aangoo prezidaantummaa BMNO irraa kaafamuu #Obbo_Lammaa_Magarsaa wantootota dhokfamanii hambifaman hedduu akka qaban wantoota ta’aa oolan irraa arguun nama hindhibu. Sababni paartii fi mootummaan akkasumas …
1) Shawaa 1865 2) Walloo 1867-1876 3) Tuulama 1879-1882 4) Macca 1882-1886 5) Wallagga 1879-1886 6) Biyya Gumaa 1879-1882 7) Biyya Gomaa 1879-1887  Liimaa …
Ilmaan Nadhii Gammadaa Jirtuu? Ilmaan Leenjisoo diigaa jirtuu? Ilmaam Waaqoo Guutuu Jirtuu? Jiraachuu keessan kiphxata boruu argina. Guyyaa boruu B/M/N Oromiyaa haaraan Shimallis Abdiisaa fi …
– MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Lammaffaa – Berhanu Hundee Barreeffama marsaa lammaffaa kutaa tokkoffaa keessatti jijjiiramni ni dhufe malee Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) galii isaa …